Sarkaal Ka Tirsan Dawladda oo Qarax Ku Dhintay
Guddoomiyihii Degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdishu ayaa maanta lagu dilay qarax miino oo haleelay isgaoo ku sugnaa xaafadda Afisyoone.
Gudoomiyihii Degmada Xamar Jajab Axmed Sheekh Max’uud Qoorleex iyo ugu yaraan mid ka tirsan ilaaladiisa ayaa ku geeriyooday qarax miino oo lagula beegsaday Xerada Afisyooni halkaas oo maal mahaan maamulka gobalka Banaadir ee dowlada kmg ah uu ka waday howlo lagu bur burinayo guryo laga dhistay. Waxaa isna qaraxaasi ku dhaawacmay ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Banaadir Warsame Maxamed Xasan.
Qaraxa uu ku dhintay Guddoomiyaha Xamar Jajab waxaa weheliyey iska horimaad udhaxeeyay Ciidamada Booliska iyo kuwa millitari ah oo deganaa xaafada Afisyooni kuwaas oo ka gadoodsanaa howsha burburinta ee halkaasi ka socota iyadoo iska horimaadkuna uu bilowday kadib markii masuuliyiinta geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay ay halkaasi gaareen si ay u siiwadaan hawshaasi burburinta dhismayaasha, waxaana iska horimaadka la sheegay inay ku geeriyoodeen dhowr askari oo labada dhinac ka kala tirsan. Dadka ku dhaawacamay iska horimaadkaaisna waxaa ka mid ah Afyaheenkii Booliska C/laahi Xasan Bariise.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Injineer Cabdirissaq Maxamed Nuur “Nuune” ayaa ku eedeeyey xubno ka tirsan ciidanka dawladda inay ka dambeeyeen inay weerar ku sooq aadeen ciidankii dhismayaashaasi buburin lahaa. Guddoomiyuhu waxa uu ku eedeeyey in xubno ka tirsan ciidanka dawladda ay ka dambeeyeen dilka Guddoomiyaha degmada Xamar-Jajajab, inkastoo haddana uu sheegay inaan meesha laga saari karin.
Dhinaca kalena, ururka Al-Shabab ayaa iyagu sheegtay inay ka dambeeyeen dilka Guddoomiyaha degmada Xamar Jajab Axmed Sheekh Qoorleex. Madaxa ururka Al-Shabab ee gobolka Banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen ayaa ku eedeeyey inuu horseed ka ahaa waxa uu ugu yeedhay "barakicinta dadka".
Waraysiga Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Injineer Cabdilqaadir Maxamed Nuur oo u warramaya Haaruun Macruuf ka dhagayso midigta sare.